मेरो भन्नु « नेपाली मुटु
Archive for the ‘मेरो भन्नु’ Category
लगाउँनु भयो त जनै ?
Posted by नेपाली मुटु on August 24, 2010
आज जनै पुर्णिमा अथवा ऋषि तर्पणीलाई हिन्दु ब्राम्हण तथा क्षत्रियहरुले विशेष रुपमा मनाउँदै छन् । पुरानो जनै फालेर नयाँ जनै लगाउँने तथा ब्राम्हणहरुबाट पुजित डोरोलाई रक्षाबन्धनका रुपमा आज लगाउँने गरिन्छ । आज लगाएको डोरो गाईतिहारका दिन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिए वैतरणी नदि तरिने जनविश्वास रहेको छ ।
ज–जसले जनै पुर्णीमा मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जनै पुर्णीमा र रक्षा बन्धनको शुभकामना । साथै खास गरि तराईमा मानिने राखीको पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना । Continue Reading लगाउँनु भयो त जनै ? >>
Posted in मेरो भन्नु | 1 Comment »
पोले पनि घामै राम्रो
Posted by नेपाली मुटु on August 23, 2010
काठमाण्डौ बसुञ्जेल काठमाण्डौलाई कति गाली गरिन्छ । छि ! फोहोर पानी, छि ! ढलको फोहोर, छि ! अस्तव्यस्त घरहरु, धुलो धुँवा ………….. आदि आदि । हुन पनि काठमाण्डौको विशेषता नै भनौं, यो सबै सहेर पनि काठमाण्डौं हामीलाई छत दिन्छ । भबिष्य दिन्छ । अवसर दिन्छ । यो काठमाण्डौको महानता हामी काठमाण्डौ बसुञ्जेल यादै गर्दैनौं तर जब हामी काठमाण्डौं छाडेर बाहिरिन्छौं, काठमाण्डौको निकै अभाव खट्किन्छ । हाम्रो बिडम्बना यो छ कि काठमाण्डौंमा जे पाईन्छ, नेपालको धेरै भुभागमा त्यो कोरा सपना जस्तो लाग्छ । भर्खरै मैले यो महशुस गरे । Continue Reading पोले पनि घामै राम्रो >>
Posted in मेरो भन्नु |4Comments »
नेकपा एमाले, न पोथी न भाले
Posted by नेपाली मुटु on July 24, 2010
>राजनीतिक वृतमा पहिलै देखि एमालेलाई उसको ढुलमुले प्रवृति प्रति तिव्र कटाक्ष गर्दै ‘न पोथी न भाले’को उपमा दिदै आइएको थियो । अहिले सहमतीय राजनीतिको माला जपेर एमालेले आफ्नो चरित्रलाई उपमाको निकट उभ्याएको छ । महाभारतमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्छन्, “हे अर्जुन ! यो धर्म युद्ध हो । यहाँ कि कौरव पक्ष रहनेछन् कि पाण्डव पक्ष । जो तटस्थ हुन्छ, त्यसले पापलाई पक्षपोषण गर्दछ । त्यसैले, यो युद्धमा कोही पनि तटस्थ रहन पाउँने छैनन् या रहनु हुदैन ।” यो कुष्णको उपदेश आज नेपालको राजनीतिक वृतमा समयसापेक्ष भएको छ । राजनीतिक द्धन्द बढ्दो छ र, उम्मेदवारी अनुसार नेपालको राजनीतिक दलहरु दुइ धु्रवमा बाँडिनु पर्ने हो । यसले मात्र नेपालको राजनीतिक द्धन्दलाई निकास दिन सक्छ । Continue Reading नेकपा एमाले, न पोथी न भाले >>
Posted in मेरो भन्नु |2Comments »
मैले सानै देखि सुनेको कुरा, राजनितीमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुदैन । अहिले आएर साँच्चै नै हो भन्नेमा पुगेको छु । अब यसका लागि कुनै साक्षी वा विशेष प्रमाणको खाँचो रहेन । कति नै बर्ष भएको छ र प्रचण्डको टाउकाको मोल राखेको ? अनि कति नै बर्ष भयो र, कमल थापालाई राजनितीक अछुत मानिएको ? तर आज यही राजनितीले यि दुबै नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउँन सक्ने बनाएको छ । हामी आम मानिसका लागि त यो एकदमै अपत्यारिलो, रोचक र विस्मयकारी हुन्छ । तर राजनितिज्ञका लागि यो केहि नयाँ रहदैन । आज मात्र एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले घरैमा गएर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेट गरे । Continue Reading ‘राजनितीमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुदैन’ >>
तानातान, हानाहान, किनबेच : उफ् राजनिती
Posted by नेपाली मुटु on July 22, 2010
राजनितीको एउटा अचम्मको रुप देख्न पाइयो । सहमतीको रटान लाएर नथाक्ने ठुला दलहरुले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी गर्दै हुने सम्म गरे । यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी हो भनेर मान्न पनि सकिएला । तर हिजो जे जे नाटकहरु मञ्चन भए के यही हो लोकतन्त्र ? यदि हो भने हाम्रो लागि लोकतन्त्र सहि छैन । तपाईले पनि त थाहा पाउँनु भयो होला नि, आज के भयो ? मलाई चै पटक्कै राम्रो लागेन । यसो भन्दैमा फेरि केहि राम्रा कुराहरु पनि देखिए । यसलाई भने म सकारात्मक नै मान्छु । आज दलहरु मेरो नजरमा : Continue Reading तानातान, हानाहान, किनबेच : उफ् राजनिती >>
काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो
अचम्म छ । जब–जब नयाँ सरकार बन्ने समय आउँछ, मधेसी दलहरुमा अनौठो एकता देखिन थाल्छ । यिनीहरुमा यत्ति आत्मियता भेटिन्छ कि यिनीहरुको बोली र चाहना पनि एउटै बन्छ । यो बिशेषता फेरि देखिन थालेको छ । आफुलाई मुलुकको चौथो ठुलो राजनितीक शक्तिको रुपमा उभ्याउँदै मधेसी दलहरु एउटै छाता मुनी उभिएका छन् । मधेसी दलहरुको काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो भने जस्तो छाता संगठन हो, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । जब काम पर्छ यिनीहरु यही छाता संगठन मुनी गोलबन्द हुन स्वतन्त्र छन् र, जब सरकारमा जानका लागि भागवण्डा लाग्न थाल्छ तब फेरि छाताबाट हट्न स्वतन्त्र छन् । मोर्चाबाट हट्ने साथ मोर्चाका विरुद्धमा चर्का भाषण पनि गरि टोपल्छन् । तर पनि पुनः मोर्चामा गोलबन्द हुन यिनीहरुलाई कुनै सकस पर्दैन । यत्तिको लोकतन्त्र त सायदै अरु कुनै छाता संगठनमा होला । Continue Reading काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो >>
Posted in मेरो भन्नु | Tagged: कुर्सीकप, मोर्चा, सरकार | LeaveaComment »
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको छाला मात्र होइन बिचार पनि गैडाको नै भएको रहेछ । उनले माओबादीलाई पछार्ने गरि राष्ट्रवादी कुरा गर्न थालेका छन् । विदेशी प्रभुको सामू गलेको भन्ने आरोपलाई दुत्कार्ने मात्रै होइन उनले विदेशीलाई पनि तथानाम गाली गर्न थालिसकेका छन् । बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा हिजो छापिएको अन्तर्वार्तामा उनले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन नखोज भनी चेतावनी दिएका छन्। हाम्रा लागि कुनै पनि प्रभु छैनन् भन्दै उनले आफूहरुलाई निर्देशन, हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको भाषा नस्वीकार्ने बताएका छन्। आफ्नो काममा मात्र चासो राख्न् पनि उनले विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई सुझाव दिएका छन्। Continue Reading वाह ! क्या बोल्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री >>
लुटेराले भने, “ माइन्ड नगर्नु होला ।”
Posted by नेपाली मुटु on April 11, 2010
यो लेख मिति २०६६ बैशाख १ को नागरिक दैनिकमा छापिएको छ
कुकुर जति नै बलियो होस्
घाटबाट कपडा ओसार्न गधा नै चाहिन्छ ।
गधा जति नै चनाखो होस्
राती भुक्न कुकुर नै चाहिन्छ ।।
यो कविता मैले कतै पढेको छु । यसको कथा पनि छ । कथा एकदम शिक्षाप्रद छ । मालिकले भोकै राखेको रिस पोख्न राती चोर आएको देखेर पनि कुकुर भुक्न नमाने पछि गधाले आफु कराएर चोर आएको सुचना दिन्छ तर आधा रातमा त्यसै कराउँने भनेर गधाले मालिकबाट नराम्ररी कुटाई खान्छ । कथाले भन्छ कि सबैको आ–आफ्नै काम हुन्छ । जब यो कार्यविभाजन हुदैन, विभिन्न दुष्परिणामहरु निस्कन्छन् । मलाई एक्कासी त्यो गधा र कुकुरको सम्झना भयो जब काठमाण्डौमा डिआइजीको घरमा डकैती भयो । डकैती भएको घरमा चार जना सुरक्षाकर्मी बस्ने गर्थे तर घरायसी कामको बोझले थकित उनीहरु घरका अरु मान्छेहरुसँगै निदाउन पुगे । परिणाम घरमा सुरक्षा दिन प्रहरीहरु हुदा–हुदै डकैती भयो । यसलाई कुकुरको काम गधाले गर्दा आउने परिणाम नभनेर के भन्ने ? अचम्म लाग्दो कुरा त ति डिआइजीले अलिकति पनि प्रतिकार गरेनन् वा आफ्नो चातुर्यता देखाएनन् । र, सुरक्षाका कारणले तत्काल प्रहरीमा खबरसम्म गर्न डराए । Continue Reading लुटेराले भने, “ माइन्ड नगर्नु होला ।” >>
राजनिती ! राजनिती !! राजनिती !!!
Posted by नेपाली मुटु on April 1, 2010
यो लेख मिति २०६६ चैत्र २९ को नागरिक दैनिकमा छापिएको छ
मेरो ब्लग खाली राजनीतिक मात्र बन्दै गईरहेको छ । राजनीतिक बिषयबस्तु भन्दा पर केहि चियाउँन खोज्छु तर जब कुरोको चुरो तिर बढ्न थाल्छु, राजनीतिको भयानक छायाँले सबै बिषय र अन्धकारहरु ढाकिदिन्छ । अनि म राजनीती नलेखेर के लेखौं ?
म अहिले राजनीतिको परिभाषालाई कुन विद्धानले के भनेका थिए भनेर खोज्न चाहान्न, न त शब्दकोष पल्टाएर अर्थ नै भेट्नु छ । खाली यो राजनीतिको फैलावटलाई नाप्ने कोशिश गर्दैछु ।
मेरो लागि वास्तवमा राजनिती सँधै चासोको बिषय रह्यो । अहिले म सम्झदैछु मेरो राजनिती कुन नेताले के भन्यो बाट सुरु हुन्छ र, देश विग्रीएर भताभुङ्ग भयो भन्दै अघि बढ्छ अनि भोली केहि होला कि भन्ने आशामा गएर टुङ्गिन्छ । यो मेरो राजनितीक सुझबुझको घेरा हो । यो भन्दा अगाडि गएर मैले आजसम्म सोचेको छैन ।
तर राजनितीको घेरा मेरो जिन्दगी वरिपरि रहेछ । मैले आफ्नै खेतमा आफ्नै मिहिनेतले फलाएको धानको दाना–दानामा राजनिती रहेछ, मैले धानको बोटमा छरेको मलमा राजनिती उर्वर हुदो रहेछ । जब मेरो खेतमा लहलाउदो धान फल्छ अनि म साईकलको बिचमा चेपेर एक बोरा धान बेच्न धान बेच्ने गोदाममा पुग्छु तब राजनिती भयानक भएर हुर्किसकेको हुदोरहेछ । म चिच्याउँछु, “मेरो धानको भाउ मेरो मिहिनेल भन्दा सस्तो भयो । मेरो धानको भाउ बजार पुगे पछि मैले थाहा पाउने होईन, मैले नै राख्न पाउनु पर्छ ।” मेरा छेउछाउकाले भन्छन्, “धानमा राजनिती गर्न थाल्यो ।” Continue Reading राजनिती ! राजनिती !! राजनिती !!! >>
एकपटक हाम्रो धरातल हेर्ने हो भने सबै कति फिक्का, औपन्यासिक र केटौले लाग्छन् । मलाई बुझ्न भई रहेछ हाम्रो वास्तविकता के हो ? हामी धनी हौ कि गरिब हौ ? म अहिले सम्पुर्ण बिषयको उत्तर चाहन्न, मेरो प्रश्न केवल पानीसँग समन्धित छ । मलाई गणितिय तथ्याकं र अनेक प्रमाणिक विवरणहरु चाहिएको छैन, मलाई नेपालका नदिनालाबाट प्रत्येक सेकेण्डमा कति घनमिटर पानी बग्दछ जान्नु छैन, म केवल यत्ति जवाफ चाहन्छु कि निर्धक्कसँग अञ्जुलीभर पानी घरमै थाप्न कहिले पाईन्छ ? Continue Reading आखिर काकाकुल भएर कहिलेसम्म बाँच्न सकिन्छ र ? >>
Posted in मेरो भन्नु, Uncategorized | Tagged: Uncategorized | 1 Comment »
“हाम्रा पालामा बत्ती त हुन्न थियो!! ‘कस्तो दु:ख गरेर पढेको’ तिमीहरुलाई के थाहा?..यस्तो आनन्द कहाँ थियो र?” Continue Reading fact >>
आधारहरु :- Continue Reading नेपालको सिमाना कति हो ? >>